Guddoomiyaha Barlamaanka Koonfur galbeed oo la doortay – Radio Daljir
Guddoomiyaha Barlamaanka Koonfur galbeed oo la doortay
Abriil 1, 2020 11:01 b 0
Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay waxaa ka dhacdey doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed oo ay ku tartameen laba musharax.
Fadhiga doorashada ayaa waxaa ku sugnaa 93 Xubnood oo ka tirsan Baarlamaanka Koonfur Galbeed,kuwaas oo musharixiinta u kala codeynayay,waxaana Guddoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed loo doortey Xildhibaan Dr Cali Saciid Fiqi oo ahaa Safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub.
Labada musharax ayaa waxaa ay codadka u kala heleen 84 Cod waxaa helay Dr Cali Saciid Fiqi oo noqdey Guddoomiyaha Baarlamaanka halka 2 Cod uu helay musharixii la tartamayay ee Maxamed Cabdiraxmaan,waxaana halaabey 8 Cod.
Guddoomiyaha Guddiga doorashada Guddoonka Baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa ku dhawaaqey in xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed uu ku guuleystay xildhibaan Cali Saciid Fiqi.
Goordhow ayaa la guda geli doonaa doorashada Guddoomiye kuxigeenada Baarlamaanka Koonfur Galbeed,hayeeshee Xildhibaanada loo fasaxey qado iyo inay Salaad soo dukadaan.
Madaxweynaha Hirshabelle oo ka tacsiyeeyey geeridii ku timid Ra’isul Wasaarihii hore Nuur Cadde
RW Kheyre oo ka hadley geerida Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Cade